Nanodrone Vcam HD ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - မိုးလုံလေလုံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ် | Gadget သတင်း
Nanodrone Vcam HD ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့သုံးသပ်ချက်ကိုမင်းတို့ယူလာပေးတယ် မိုးလုံလေလုံမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ ငါတို့အများဆုံးကြိုက်ခဲ့သည် သူ့နာမည်မှာ Nanodrone Vcam HD ကို ပြီးတော့သင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းသေးငယ်သည့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စင်း (၎င်းသည်သင်၏လက်ဖဝါးနှင့်ကိုက်ညီသည်) သည် HD အရည်အသွေးရှိဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရိုက်ကူးနိုင်သည့်အစွမ်းထက်သော HD ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည်။ စျေးနှုန်းမှာယူရို ၈၉.၉၀ ဖြစ်ပါသည် y မင်းဒီကနေဝယ်နိုင်တယ်.
5 Nanodrone Vcam HD ဗီဒီယို
6 nanodrone Vcam HD ကိုဝယ်ပါ
7 box ကို contents တွေကို
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပေါ့ပါးပြီး 1080 x 720 ကင်မရာnanodrone သည်ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးခြင်းနှင့်လက်ခံနိုင်သောအရည်အသွေးထက်ပိုမိုသောဓါတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်အလေးချိန်ကိုအရေးယူခြင်းမရှိပဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤအပိုင်းရှိမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အများစုထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည် ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရန်အတွက်ခလုတ်နှစ်ခုကိုခလုတ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည် လက်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်ရန်မလိုဘဲ။
သံသယမရှိဘဲကတစ်ခုဖြစ်သည် ဒီမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏အားသာချက်။ အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး၎င်းအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်သည် အခက်အခဲ4အဆင့် ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်အသုံးပြုသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ပျော်စရာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်လာသည်။ အခြေခံအကျဆုံးနည်းလမ်းတွင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်အလွန်နှေးကွေးစွာရွေ့လျားသည်။ ထို့ကြောင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုတစ်ခါမျှမသုံးဖူးသူများသည်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ယူခြင်းကိုအဆင်ပြေစွာခံစားနိုင်အောင်၎င်းကိုချိုးဖောက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ သို့သော်သင်မည်သို့လျင်မြန်စွာလေ့လာပြီးသင်သွားမည် လက်ချောင်းများပြုလုပ်ခြင်း ဒီမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကိုသင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအဆင့်သို့တက်နိုင်အောင် တန့်နှင့် 360 °ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပါစေ.
အဲဒီမှာရှိပါတယ် အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ပျံသန်းမှု mode ကို။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရှေ့သို့၊ နောက်သို့မျက်နှာမူသည်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့သို့၊ နောက်သို့၊ ညာသို့ဘယ်သို့ရွေ့သည်ဖြစ်စေမောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရှေ့သို့မျက်နှာ။
သော်လည်း အိမ်တွင်းကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်Vcam HD nanodrone သည်လေတိုက်နှုန်းနည်းသောနေရာများတွင်ပျံသန်းနိုင်သည်။ လေထဲမှာတိုက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်း၏အလေးချိန်နိမ့်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လက်တွေ့အားဖြင့်မထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့် crashing ၏အန္တရာယ်မြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ဒီဇိုင်းသည်တော်တော်လေးကောင်းမွန်ပြီး၊ ငါအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများတယ်။ ၎င်းသည်အလင်းရောင်များတပ်ဆင်ထားပြီးညဘက်တွင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားပျံသန်းနိုင်ပြီးကိရိယာ၏အရှေ့ဘက်နှင့်နောက်ကျောမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသိရှိနိုင်စေသည်။
ဒါဟာအစနှင့်၎င်း၏ဆန့်ကျင်အတော်လေးကြံ့ခိုင်ဖြစ်ပါတယ် အကာအကွယ်ဖွဲ့စည်းပုံ သင်ကဓါးသွားကိုမချိုးဘဲမည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမဆို crash ခွင့်ပြုသည်။
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုခလုတ်များပါသော Nanodrone Controller
nanodrone Vcam HD ၏ထုတ်လွှင့်မှုသည် ထိုအချိန်မှစ၍ ပြီးပြည့်စုံသည် ဒါကသေးငယ်တဲ့ display ကိုရှိပါတယ် မှတဆင့်ကျနော်တို့အခြေခံအကျဆုံး parameters တွေကိုတွေ့နိုင်ပါသည်:
ပျံသန်းမှုအခက်အခဲဒီဂရီ (0%, 50%, 75% သို့မဟုတ် 100%)
ထိန်းချုပ်မီးများဖွင့် / ပိတ်
Nanodrone Vcam HD ဗီဒီယို
ဒီနေရာမှာအပြည့်အဝလည်ပတ်နေတဲ့ nanodrone ရဲ့ဗီဒီယိုပါ။ ၎င်းတွင်သင်အသုံးပြုရန်ရိုးရှင်း။ ခေတ်မီပျော့ပျောင်းသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
nanodrone Vcam HD ကိုဝယ်ပါ
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏စျေးနှုန်းမှာယူရို ၈၉.၉၀ ဖြစ်ပြီး၊ သင်ဤ link ကိုမှတဆင့်အငြိမ့်ဝယ်နိုင်ပါတယ်.
nanodrone သေတ္တာပါအကြောင်းအရာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဘက်ပေါင်းစုံကင်မရာဖြင့် Nanodrone VCAM HD ကို
2,4 Ghz ထုတ်လွှင့်စက်
အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် Li-po ဘက်ထရီ
Nanodrone Vcam HD ကို
အကြွင်းမဲ့အာဏာထိန်းချုပ်မှု mode ကို
သတင်းအချက်အလက် display နှင့်အတူဘူတာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Nanodrone Vcam HD ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင်၏ဓါတ်ပုံများကို Cloud တွင်လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းရန်ဝန်ဆောင်မှုများ ၅ ခု